Ezo nkcukacha zincinci zikususa kubomi obunempilo | IBezzia
Susana Garcia | 04/05/2021 20:00 | YeNtlalontle, ZeMpilo
Ngamanye amaxesha izinto ezincinci zineziphumo ezikhulu kwaye ubungqina boku kukuba ukuxuba izimbo zomzimba ezincinci kunokukhokelela kubomi obungenalo uhlobo lobomi esifuna ukubukhokela. Iinkcukacha ezincinci zobomi bemihla ngemihla ziyasinda kuthi kodwa inokuthatha isigqibo xa kuziwa ekukhokeleni indlela yokuphila uzimisele okanye uyitshintshe ngokupheleleyo. Kubalulekile ukugxininisa kungekuphela kwizijekulo ezinkulu kodwa kwanezona zincinci.
Un Iinkcukacha ezincinci eziphindaphindwayo yonke imihla iba yinto esichaphazelayo Ezininzi. Oku kuya kuyo yonke into kwaye kunokuba yinto elungileyo kuba xa kukho utshintsho oluncinci sinokufikelela iinjongo ezinkulu. Ke masifumanise ukuba zeziphi ezo nkcukacha zincinci namhlanje ezingakuvumeliyo ukuba uphile ubomi obunempilo.
1 Awucwangcisi izidlo zakho
2 Uzivumela izinto ezininzi
3 Ujolisa kuphela ekulahlekeni kobunzima
4 Wenza imidlalo ongayithandiyo
5 Vumela ukuba uzive utshintsho
Awucwangcisi izidlo zakho
Oku kunokuvakala kungaqhelekanga kodwa ukuba asizicwangcisi izidlo zethu kulula kakhulu kuthi ukuba siwele kwisilingo sokutya into engenampilo eqhutywa kakhulu okanye enamafutha neswekile. Kungenxa yoko le nto ucwangciso olulungileyo lunokukunceda kakhulu xa kuziwa ekuqaleni kobomi obunempilo. Singazonwabisa kodwa kufuneka babambe ixesha, kuphela ngeentsuku ezikhethekileyo. Elinye ixesha kufuneka sinamathele kwelinye ukutya okusempilweni kunye nokusempilweni ukunqanda ukongeza amashwamshwam okanye izinto ezinokwenza ukutya kwethu kuyeke ukuba sempilweni.
Uzivumela izinto ezininzi
Kuyinyani ukuba sihlala sineentsuku ezithile xa sinqwenela into emnandi okanye kunzima ukungatyi okanye ukusela utywala ngexesha lepati. Kodwa ezi ntlobo zezinto zisenza ukuba ekugqibeleni singakwazi ukukhokelela kwindlela yokuphila esempilweni njengoko sifuna phantse ngaphandle kokuyiqonda, kuba Siye sithabatheke yile minyinyiva mincinci. Ke kubalulekile ukuba sihlale siziqonda iintsuku apho sinokufikelela khona, ngaphandle kokuzibaxa izinto. Ayisiyiyo kuphela impilo yethu kunye nomgca wethu oza kusibulela, kodwa kwanesisu sethu. Uya kuqaphela ukuba iindlela zokugaya ukutya azikho nzima kangakanani kwaye uzive ungcono kwaye ungcono.
Ujolisa kuphela ekulahlekeni kobunzima
Le ayisiyiyo panacea yobomi obusempilweni, kuba kukho abantu abanokuba nobunzima obukhulu kodwa babe sempilweni kwaye abanye babhityile. Ke cinga ukuba ayisiyiyo malunga nokunciphisa umzimba ukuze ujongeke ngcono, imalunga nokunyamekela umzimba wakho ukuze uzive ungcono. Xa sizikhathalela siphucula ukuzithemba kwethu kodwa nempilo yethu, amajoni omzimba kwaye ke siphucula umzimba wethu wonke kwixesha elifutshane nelide. Umbono wehlabathi jikelele wezempilo kude naleyo yefashoni ejolise kuphela kwisikali.
Wenza imidlalo ongayithandiyo
Le yimpazamo, kuba ekuhambeni kwexesha uya kugqiba ungadlali imidlalo. Wonke umntu unokufumana umsebenzi ohambelana nabo indlela yobomi kunye nezinto ozithandayo. Oku kubalulekile ukuba ihlale ixesha elingaphezulu kwexesha. Kungenxa yoko le nto kungafanelekanga ukuba uguqule imisebenzi yakho kwaye uzame ukuba zingaphi ezitsala umdla wakho, kodwa kuya kufuneka ujonge ezo uzithandayo ukuze zibe yinxalenye yobomi bakho.
Vumela ukuba uzive utshintsho
Utshintsho alwenzeki ngobusuku obunye kwaye yiyo loo nto ngamanye amaxesha kuba nzima ukulwenza. Kubalulekile mamela umzimba wethu xa sisenza utshintsho kwindlela yethu yokuphila, kuba uya kusixelela ukuba siqhuba kakuhle. Oku akwenzeki ngobusuku obunye, kodwa impilo-ntle yomzimba nengqondo iza nobomi obuphilileyo yiyo loo nto siyakuyibona xa siziva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iinkcukacha ezincinci ezikuthintela ekubeni ube nobomi obusempilweni